किन तपाईं गुगल युनिवर्सल एनालिटिक्स अपग्रेड गर्नुहोस् Martech Zone
किन तपाई गुगल युनिवर्सल एनालिटिक्स अपग्रेड गर्नु पर्छ
बुधबार, अक्टोबर 15, 2014 आइतबार, अक्टोबर 19, 2014 टिम चकमक
यस प्रश्नलाई अब बाटोबाट बाहिर निकालौं। तपाईंले अपग्रेड गर्नु पर्छ गुगलको नयाँ युनिवर्सल एनालिटिक्स? हो। वास्तवमा, तपाई सम्भवतः पहिले नै युनिभर्सल एनालिटिक्समा अपग्रेड गरिएको छ। तर, किनभने गुगलले तपाईंको लागि तपाईंको खाता अपडेट गर्‍यो, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले अरू केहि गर्नुपर्दैन वा तपाईं नयाँ युनिभर्सल एनालिटिक्स खाताबाट अधिक फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ।
अहिले, गुगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स मा छ तेस्रो चरण यसको रोलआउटको। यो बीटा भन्दा बाहिर छ र प्राय: खाताहरू स्वचालित रूपमा अपग्रेड हुँदैछ। वास्तवमा तपाई पुरानो संस्करण पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्न विश्लेषण अब नयाँ खाता सेट अप गर्दा। जब युनिभर्सल एनालिटिक्स पहिलो बेटाबाट बाहिर आयो, यो अझै पनि धेरै कम्पनीहरूको लागि एक महत्वपूर्ण सुविधा हराइरहेको थियो। त्यो प्रदर्शन विज्ञापन सुविधाहरू थियो जुन तपाईंलाई सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ retargeting सुची। अब, प्रदर्शन सुविधाहरू युनिभर्सल एनालिटिक्स (युए) मा पूर्ण रूपमा एकीकृत छन्, मतलब त्यहाँ युएएमा जानेबाट नयाँ खाता फिर्ता लिने कुनै कुरा छैन। जहाँसम्म, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको खाता अपग्रेड गरिएको छ कि अपग्रेड गर्दा अझै पनि हेर्नको लागि त्यहाँ छैनन्।
हेर्नका लागि चीजहरू
अहिले, यदि तपाईको साइटमा कोडले ga.js, urchin.js, वा कोडको WAP संस्करणहरू प्रयोग गर्दछ भने तपाईले कोड अपडेट गर्नुपर्नेछ जब Google पुग्छ। युनिवर्सल एनालिटिक्स अपग्रेडको चरण चार। चरण चार सुरू गरेको दुई वर्ष भित्र, कोडका ती संस्करणहरू अस्वीकार्य हुनेछन्। र यो स्क्रिप्ट मात्र होईन जुन छोडिनेछ। यदि तपाईंसँग हाल कस्टम भ्यारीएबलहरू वा प्रयोगकर्ता परिभाषित चरहरू छन् जुन तपाईं डाटा ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले तिनीहरूलाई अनुकूलन आयाममा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न अझ सक्षम हुनुहोस्, किनकी तिनीहरू पनि अस्वीकार्य हुनेछन्।
यसको मतलब भविष्यमा पनि यदि तपाईं घटना ट्र्याकिंग गर्ने पुरानो तरीकाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो घटना ट्र्याकिंग कोडको नयाँ संस्करणमा पनि अपडेट गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए, यदि तपाईंको कोड अझै अद्यावधिक गरिएको छैन भने, किन दुई वर्ष पर्खनुको सट्टा अब सबै समस्याहरू हुँदै जानुहोस्?
किन अपग्रेडिंग समाप्त?
गुगलको अपग्रेडको कारण उनीहरूको लागि तपाईंको समय बर्बाद गर्नु मात्र थिएन। उनीहरूले केहि सुविधाहरू जारी गर्‍यो, यदि तपाईंले ती लागू गर्न समय लिनुभयो भने, तपाईंलाई यस्तो चीजहरू नाप्न सक्षम गर्दछ जुन तपाईंलाई पहिले कहिल्यै थाहा नहुन सक्छ। नयाँ प्लेटफर्मले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ:
कुनै पनि चीजबाट डाटा स Collect्कलन गर्नुहोस्
अनुकूलन आयाम र कस्टम मेट्रिक्स सिर्जना गर्नुहोस्
प्रयोगकर्ता आईडी स्थापना गर्नुहोस्
वर्धित ईकॉमर्सको उपयोग गर्नुहोस्
गूगलसँग अब डेटा स collect्कलन गर्ने तीन तरिकाहरू छन्: वेबसाइटहरूको लागि एनालिटिक्स.जे, आईओएस र एन्ड्रोइडका लागि मोबाइल एसडीके, र - मेरो लागि सब भन्दा रमाइलो - डिजिटल उपकरणहरूका लागि नाप प्रोटोकल। त्यसैले अब तपाईं आफ्नो वेबसाइट, तपाईंको अनुप्रयोगहरू, र तपाईंको कफी मेसिन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, गुगल एनालिटिक्स भित्र। व्यक्तिहरूले काम गर्न मापन प्रोटोकल पहिले नै राखेका छन् ताकि उनीहरूले स्टोरमा फुटको ट्राफिक गणना गर्न सक्छन्, तापक्रम मोनिटर गर्न सक्छन् र अधिक। सम्भावनाहरू वास्तवमा अन्तहीन हुन्छन्, विशेष गरेर अर्को नयाँ सुविधाको कारण।
अनुकूलन आयाम र कस्टम मेट्रिक्स
अनुकूलन आयामहरू र अनुकूलन मेट्रिक्स वास्तवमै पुरानो कस्टम भ्यारीएबलको सूप अप संस्करण हो। तपाईंलाई यी नयाँ आयामहरू कत्तिको शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने धारणा दिन, मानौं जब एक व्यक्ति तपाईंको सेवाको लागि साइन अप गर्दछ जब येल्प जस्तो सेवा जस्तो देखिन्छ, तपाईं उनीहरूलाई प्रश्नहरूको श्रृंखला सोध्नुहोस्। तपाईं तिनीहरूलाई एक प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको अनुकूलित आयाम छ जुन तपाईंले कल गर्नुभयो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट प्रकार। यी प्रश्नहरूको जवाफ मेक्सिकन खाना, स्यान्डविच पसलहरू, आदि हुन सक्छ। त्यसोभए तपाईले अनुगमन प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूले महिनामा कति पटक खाए। यसले तपाईंलाई नयाँ कस्टम मेट्रिक दिन्छ रकम प्रत्येक महिना बाहिर खाइन्छ वा AEOM। त्यसोभए, अब तपाई आफ्नो डेटामा हेर्न सक्नुहुनेछ कि बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरूलाई सेगमेन्ट गर्न कि तिनीहरूले तपाईंको साइट कसरी प्रयोग गर्छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले सेग्निम पसलहरुलाई मन पराउनु हुन्छ जुन हप्तामा times पटक बाहिर खानेछ। यो तपाइँ तपाइँको साइट मा कसरी राम्रो लक्षित सामग्री जान्न मद्दत गर्न सक्छ। सम्भावनाहरू अन्तहीन हुन्छन्, विशेष गरी जब यसलाई तपाईंको मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा थप्दा। यदि तपाईंले यो ट्र्याकिंग आफ्नो मोबाइल खेलमा थप्नुभयो भने, तपाईंले ग्राहकका खेलहरू खेलिरहेका सबै प्रकारका फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
धेरै ग्राहकहरूले मोबाइल अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरिरहेका छन् र ग्राहकहरूले फोन, ट्याब्लेट र अन्य उपकरणहरू बीच स्विच गरिरहेका छन्, तपाईले कहिले पनि थाहा पाउनु भएन कि परम्परागतसँग तपाईले प्रति महिना कति अनौंठो र सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गर्नुभयो। विश्लेषण। अब कस्टम आईडी बनाएर जुन तपाईंले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई दिनु भएको हो, तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ जसले आफ्नो फोन, ट्याबलेट, र ल्यापटप प्रयोग गर्दछ तपाईंको साइटमा एक प्रयोगकर्ताको रूपमा पहुँच गर्न। यसले तपाईंलाई पहिले भन्दा बढि अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ कसरी तपाईंको ग्राहकहरूले तपाईंको सेवा प्रयोग गर्दैछन्। यसको मतलब कुनै अधिक डबल वा ट्रिपल गन्ती प्रयोगकर्ताहरू छैनन्। तपाईंको डाटा भर्खर क्लीनर भयो।
वर्धित ईकॉमर्स रिपोर्टहरूको साथ, केवल तपाईंको साइटमा प्रयोगकर्ताहरूले के खरीद गरेको पत्ता लगाउनुहोस् र कति राजस्व ल्यायो। तिनीहरूले कसरी खरीद समाप्त गरे भनेर फेला पार्नुहोस्। तपाईं रिपोर्टहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ जस्तै ग्राहकहरूले उनीहरूको कार्टमा थप गरिरहेछन् र उनीहरूको कार्टबाट के हटाइरहेका छन्। तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि जब उनीहरू चेकआउटको थालनी गर्दछन् र कहिले ती फिर्तीहरू प्राप्त गर्दैछन्। यदि ईकामर्स तपाईंको साइट को लागी महत्वपूर्ण हो, यस मा गहिरो हेर्नुहोस् यहाँ त्यहाँ हेर्न को लागी यति धेरै छ।
यहाँ कसरी एक भिडियो छ प्राइसग्रेबर गुगल युनिवर्सल एनालिटिक्स प्रयोग गर्दैछ:
तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंसँग पहुँच भएको नयाँ डाटाको फाइदा लिनुहोस् ताकि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई उपकरणहरूमा अझ राम्रो अनुभव दिन सक्नुहुनेछ।
टैग: Google विश्लेषणगुगल सार्वभौमिक एनालिटिक्सप्राइसग्रेबरसार्वभौमिक एनालिटिक्सगुगल विश्लेषक अपडेट गर्नुहोस्गुगल एनालिटिक्स अपग्रेड गर्नुहोस्सार्वभौमिक विश्लेषणमा अपग्रेड गर्नुहोस्विश्वव्यापी विश्लेषक के होकिन सार्वभौमिक एनालिटिक्स अपग्रेड
टिम फ्लिन्ट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ चकमक एनालिटिक्स, डिजिटल एजेन्सी अनलाइन सशुल्क मिडिया, वेब एनालिटिक्स, र रूपान्तरण दर अप्टिमाइजेसन दुई र ठूला दुवै कम्पनीहरूको लागि ध्यान केन्द्रित गर्दछ। उनी पनि यसका संस्थापक हुन् स्मार्टअप ईन्डी, एक मासिक मिटअप समूह जसले स्टार्टअप संस्थापकहरू र बजारहरूलाई स्टार्टअपहरूको लागि कसरी उनीहरूको ब्यापार राम्रोसँग बढाउन सिकाउँदछ।
के तपाईंले अर्को बजार प्लेटफर्म निर्माण वा किन्नु पर्छ?